May 13, 2020 1259
मेष : सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । तारिफयोग्य कामले धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। सामा’जिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ र आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ। तारिफयो’ग्य कामले दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने ‘बेला छ। धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्नेछ । आफन्तहरुको सहयोग’ले उपलब्धिमुलक कामहरु बन्नेछन् भने दैनि’कीलाई सहज रुपमा परिणत गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा अध्ययन यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ ।
बृष : माया प्रेममा अबश्विास तथा धोका हुँने अधिक सम्भावना रहेकोछ । अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला। परि’स्थिति अलि बिग्र’न सक्छ। सानोतिनो समस्याले अल्झाउनेछ भने स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल रहनेछ। व्यवहारमा शुभचिन्तक’हरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। दिउँसोदेखि काम देखाएर प्र’भाव जमाउन सकिनेछ। बिहानको समय उत्तम रहेकोले नयाँ काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । समय मध्ययम रहेकोले कुनै व्यापार व्यावसाय&लगानि गर्नको लागि केहि ‘दिन कुर्नुहोला ।
मिथुन : राजनिति तथा समाज’सेवामा अलि बढि गम्भिरता अपनाउँनुहोला आलोचना गर्नेहरु सक्रिय रहनेछन् । कृषि पेशा अपनाउँनेहरुले मन’ग्गे रुपैया पैसा संग्रह गर्न सक्नेछन् । प्रेममा अबिश्वास बढ्ने योग रहेकोछ भने कुनै काम गर्दै हुँनुहुँन्छ भने बिहानको समय उत्तम रहेकोछ । समय अनुकुल नहुँनाले आमा तथा परिवारका स’दस्यहरु तपाई’देखि टाडिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । बिद्यार्थिहरुले पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा भनेजस्तो नतिजा हात लगाउँन गाह्रो पर्नेछ ।
कर्कट : बुद्धिको उपयोगले परिस्थिति अनु’कूल बनाउन सकिनेछ। मध्याह्नपछि व्यापा’र बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। आयआर्जनका नयाँ स्रोत समेत फेला पर्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने आ’कर्षक उपहारले उत्साह जगा’उनेछ। छुट्टिएका माया’ प्रेमहरु पुनः जोडिने अधिक सम्भा’वना रहेको छ भने नयाँ नयाँ प्रेम प्रस्ताब आउँनेछ । शिक्षा क्षेत्रसँ’ग सम्बन्धि पेशा व्यावसायबाट मनग्गे धन कमाउँन सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानले प्रगति गरि तपाई’लाई सम्झनेछन्’ ।
सिहं : आफन्त तथा परिवारको साथ रहने हुँदा उपलब्धिमुलक कामहरु समयमा नै सम्प’न्न हुँनेछन् । कामको मेसो नमिल्दा केही अलमल हुनेछ। तापनि मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रग’ति हुनेछ। गुरुज’नको सुझाव र सन्तानको सहयोग लाभदा’यी बन्नेछ। विशेष काममा जग बसाउने मौका जुट्नेछ। दिउँसोदेखि भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। होटल तथा रेष्टु’रेन्ट व्याव’सायमा समय ख’र्चिने हरुले प्रशस्त नाँफा कमाउँन सक्नेछन् ।
कन्या : न्यायिक निर्णय तथा कानुनि फैसला’हरु तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् । पढाई लेखा’ईमा मन जाने हुँनाले अरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा सुरक्षित रहनेछ । भाग्यले साथ दिने हुँनाले थोरै लगानिबाट मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तसँग’को सम्बन्धमा सुमधु’रता बढेर जानेछ भने माया प्रेम’को डोरो कसिलो भएर जानेछ । आन्तरिक व्यावसायिक यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ भने सका’रात्मक उपल’ब्धि हात लाग्नेछ ।’
तुला : बिवादित निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न हुँनेछ । पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट ‘नतिजा आउँने हुँदा घर परिवार तथा आफन्तहरु खुसि हुँनेछन् । व्यापार व्यावसा&यमा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि हुँने योग रहेकोछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु हल भएर जानेछन्’ भने संकटबाट” मुक्ति मिल्ने समय रहेकोछ । नोकरीमा प्रतिष्पर्धिहरुलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने सत्रुता राख्नेहरु आफै सा’ईड लाग्नेछन् ।
बृश्चिक : दाजु तथा अग्रजको सहयोगले उपलब्धिमु&कामहरु गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा अध्यापनमा मन जाने हुँनाले नयाँ नयाँ कुराको खोजमा समय बित्नेछ । माया प्रेममा रमाउँन सकिने ‘समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसा&यमा लगानि गरि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ भने ईच्छित चाहनाहरु पुरा हुँने हुँनाले मन चङगा हुँनेछ । भुमि बाहन तथा पैत्रिक सम्पतिको उप&योग गरि थप फाईदा लिन सकिनेछ ।
धनु : व्यापार व्यावसायमा लगा’नि गरि मनग्गे नाँफा कमाउँन सकिनेछ । सोख र हडबडीले केही समस्या निम्त्याए पनि ज्ञान, कला र व्यक्तित्वमा निखार’ता आउने समय छ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। पारिवारिक जमघट’का बीच स्वादिष्ट खानपानको अवसर प्राप्त हुनेछ। आक’र्षक उप’हारले उत्साह जगाउनेछ। खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा लगानि गर्नेहरु सफल रुपमा स्थापित हुँनेछन् । नोकरिमा बढोत्त’रि हुँने योग रहेकोछ भने राजनिति गर्नेहरुले राज्यबाट बिशेष पद प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मकर : पढाई लेखा’ईमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । भौतिक सम्प’ति तथा बिलाशि बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने समय रहेकोले मन प्रशन्न हुँनेछ । सामाजिक कामहरु सम’यमानै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मा’नमा बृद्धि हुँनेछ । राजनिति कर्मिले सर्बसाधारणको काम गरि पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । माया प्रेममा सामि’प्यता बढेर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन खुसि रहनेछ ।
कुम्भ : काम गर्दा ध्या’न दिनुहोला काम बिग्र’ने तथा जरिवाना तिुर्न पर्ने हुँन सक्छ । आकस्मिक रुपमा खर्च बढ्ने योग रहेकोछ भने अरुको भर पर्दा काम’हरु बिग्रने अधिक सम्भावना रहे’कोछ । बिदेशि धन सम्पति हात लाग्ने समय रहेकोछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउँन सक्नेछन् । अन्य क्रियाकलापमा ध्यान जादा पढाई लेखा’ई अधरै रहनेछ । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ।
मीन : अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। दिउँसोदेखि आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिलेका कामबाट प’नि प्रशस्त लाभ’ हुनेछ गुरुहरुको राम्रो सहयोग पाईने हुँदा गन्तब्य पहिल्याउँन सहज हुँनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगा’नि बढाई आम्दानिका स्रोतहरु पढाउँन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा मानव निमित बस्तुहरु प्राप्तिको गति’लो योग रहेकोछ । लामो समय देखि भेट नभएका मित्रहरु सँग भेट हुँनेछ ।
तपाईको दिन शुभ रहोस् ।।
Prev‘बच्चा कहिले जन्माउने’ भनेर सोध्दा स्वस्तिमा दिइन् यस्तो जिल्ल पार्ने जवाफ (भिडियोसहित)
Nextहोसियार! के तपाईं सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? यस्तो सम्म हुन्छ : हेर्नुहोस्
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित)